FAALLO: Shirka Wada Tashiga New Deal oo furmayo iyo Maamul-gobaleedyadda Puntland iyo Jubbaland oo qaadacay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
FAALLO: Shirka Wada Tashiga New Deal oo furmayo iyo Maamul-gobaleedyadda Puntland iyo Jubbaland oo qaadacay
On Jul 28, 2015 Last updated Jul 28, 2015
Sida qorshuhu yahay waxaa magaalladda Muqdisho berrito ka furmi doona Shirweyne Caalami ah oo looga tashanayo Qorshaha Siyaasadda, Maalgashiga, Maaraynta Kaalmooyinka Caalamka iyo Hiigsiga cusub ee sannadka soo socda.
Shirkaasi ayaa waxaa la filayaa inay ka soo qeyb galaan Ergooyin Caalami ah iyo Madaxda Maamul-gobaleedyadda dalka, inkastoo ay Maamulladda Puntland iyo Jubbaland sheegeen inay qaadaceen Kulankaasi..
Shirka waxaa kaloo lagu eegi doonaa waxyaabihii ka fulay Shirkii lagu unkay Barnaamijka Hiigsiga cusub ee Somalia oo sannadkii 2013-kii lagu qabtay caasimadda dalka Belgium ee Brussels iyo qaabkii loo maareeyey Kaalmooyinkii ay Beesha Caalamka ugu yabooheen Dowladda Federalka.
Shirweynahaasi oo ay QM iyo Dowladda Federalka wada guddoomin doonaan ayaa laga filayaa in lagu dejiyo dhamaystirka Qorshaha Hiigsiga cusub ee Somalia, inkastoo ay jiraan caqabo saamayn ku yeelan kara Kulankaasi.
Madaxweynayaasha Maamul-gobaleedyadda Puntland iyo Jubbaland, C/weli Gaas iyo Axmed Madoobe ayaa si wadajir ah uga biyo diidsan inay ka soo qeyb galaan Shirka Wada-Tashiga Qaranka iyo Hiigsiga Cusub ee lagu wado inuu berrito ka furmo Muqdisho.
Galaangal xooggan ayey Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’isul-wasaare Sharmaarke u galeen sidii Madaxda Puntland iyo Jubbaland loogu qancin lahaa inay yeeshaan dulqaad siyaasadeed iyo inay u kal-furnaadaan La-macaamilka Dowladda Federalka iyo Maamulka Galmudug.
Safarkii Ra’isul-wasaare Sharmaarke, ciidda ka hor ku tegay Garowe iyo Safarkii Madaxweyne Xasan shalay kaga soo laabtay Kismaayo ayaa ujeedkiisu ahaa inay Madaxda Puntland iyo Jubbaland ku soo qanciyaan Kal-furnaan Siyaasadeed.
Laakiinse, dadaalkaasi waxa uu noqday ma-dhalays, waxayna C/weli Gaas iyo Axmed Madoobe qaadaceen Shirweynaha Caalamiga ee u furmi doona Dowladda Federalka, Dowlad-gobaleedyadda iyo Beesha Caalamka.
Labadaasi Hoggaamiye oo xulufo siyaasadeed iyo mid beeleed ku mataanoobay ayaa u muuqda inay fashiliyaan Siyaasadda Dowladda Federalka iyo xiriirka Dowladda Dhexe ee Beesha Caalamka iyo inaysan Madasha la fariisinin Maamulka cusub ee Galmudug.
Maqnaanshahooda waxa uu gaasir ka dhigi karaa Kaamil noqoshadda Muhiimadda Shirka, waxaana hubaal ah inay Hoggaamiyayaashaasi cambaarayn jeedin doonaan marka la soo gebagebeeyo Shirkaasi, waana la filan karaa inay yiraahdaan: “Looma wada dhamaa Shirkaasi iyo erayo kale”.
Madaxweynaha Maamul-gobaleedka K/galbeed Soamlia, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka mid ah Madaxda ka qeyb galayso Shirkaasi, isagoo horey jaal ula ahaa C/weli Gaas iyo Axmed Madoobe, mana kala cadda inuu weli xulufo la yahay iyo inuu ka gaabsaday Isbahaysigooda.
Sidoo kale, Madaxweynaha Dowlad-gobaleedka Galmudug, C/kariim Xuseen Guuleed ayaa xaadir ku ah Muqdisho, si uu markii ugu horreysay uga qeyb galo Shirweynahaasi, oo lagu wado in lagu qabto Garoonkii Ciiddanka Cirka ee Afisiyoone oo kaabiga ku ah Garoonka Caalamiga ee Diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Madaxweyne Guuleed waxa uu fursad u yeelan doonaa inuu kulamo isbarasho la yeesho Madaxda Dowladaha iyo Ururradda Caalamiga ee lagu casuumay Shirkaasi iyo inuu Maamulkiisa Aqoonsi iyo Cod ku dhex yeesho Shirarka looga tashanayo Danaha iyo Mustaqbalka Dadka iyo Dalka Somalia.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inuu Shirkaasi muhiimad khaas ah u leeyahay Shaxda Hayinka Dowlada Dhexe iyo Dowlad-gobaleedyadda hoos taga iyo in Beesha Caalamka loo bandhigo Istaraatijiyadda Hiigsiga cusub ee Somalia, Sugidda Ammaanka, Maalgashiga Mashaariicda Horumarinta, Dhaqancelinta iyo caqbadaha hor taagan Taabagelinta Hiigsiga Nabadda iyo Qabashadda Doorashadda Madaxtinimadda ee sannadka soo socda.
Waa hubaal in Dowladda Federalka gaabis ku yahay Waqtiga iyo in la hirgeliyo Ajendayaasha ku cad Hiigsiga Cusub ee Somalia, waxaana aad loo hadal-hayaa inaysan suurtogal ahayn in ay sannadka soo socda Doorasho Dimuqraadi iyo qof iyo codkiisa ka dhacdo dalkeenna.
Caqabadaha muuqda iyo kuwa dahsoon ayaana humaag gelinaya inay Dowladda Federalka kursiga ku degi doonto marka uu ka dhamaado Xilli-hawleedka Dastuuriga.
Waxaana suurto-gal ah wixii xilligaas ka dambeeyo in madaxa lala geli doono marnaansho Dowladnimo, haddii aan Dowladda Federalka loogu darin Xilli-kordhin KMG ah, oo ugu yaraan 6 bilood ilaa hal sanno ah.
Guddoomiyaha Barlamaanka Federalka Somalia, Prof. Maxamed Sheekh Osman “Jawaari” oo ah Siyaasi rug-caddaa, Aragti dheerna leh ayaa ka shanqariyey inaysan caqligal ahayn inay Somalia ka dhacdo Doorasho Qof iyo Codkiisa “One Man and One Vote”.
Si kastaba ha ahaatee, markaynu gorfeyn siyaasadeed ku xeerino Shirka Wada-tashiga ee Hiigsiga Cusub ee berrito ka furmayo Muqdisho waxa uu leeyahay Muhiimad Qaran, Waxaase ayaan-darro noqon karta haddii ay Ergooyinka Beesha Caalamka ku dhawaaqaan Taageero Dhaqaale oo cusub, tiiyo aan Xisaab-xir muuqda lagu samaynin haddii ay Dowladaha Calaamka bixiyeen Yaboohoodii Lacageed iyo halkii lagu kharaj gareeyey Kaalmooyinkii Dhaqaale ee horey loogu yaboohay Shirarkii London iyo Brussels.
Dhageyso: Labada Gole Ee Dowladda Oo Ku Hishiiyay In Doorasho aysan Ka Dhicin Dalka 2016-ka
Masar oo sheegtay inay Dowladda Federalka ka taageerayaan La-dagaalanka Alshabaab